Splicing စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် DB-G အမျိုးအစားသံမဏိကြိုးသယ်ဆောင်စက်ခါးပတ်အစက် Antai
၁။ အအေးနှုန်းသည်မြန်ဆန်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်အားကိုများစွာလျှော့ချပေးနိုင်ပြီးအဆစ်အတွက်လိုအပ်သောအချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
1. လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်: 0.75KW
2. Linear မြန်နှုန်း: 0.3m / s ကို
၁။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ် ဦး မှလည်ပတ်ရမည်။
3. Peeling off သောအခါ width သည်သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များထက်မပိုစေရ။
Conveyor Belt vulcanizer ဟုလည်းခေါ်သည့် conveyor belt သည် vulcanizing press သို့မဟုတ် belt belt vulcanizing press machine ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်သန္ဓေတားစက်အားပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်စက်ခုတ်ခြင်းအတွက် vulkanizing ကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် EP၊ ရာဘာ၊ နိုင်လွန်၊ ပတ္တူစတီးလ်ကြိုးကြိုးစသည်တို့ကဲ့သို့သော conveyor belt များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
ခါးပတ် vulcanizer သည်အားကိုးရလွယ်ကူပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောစက်ဖြစ်သည်။ သတ္တု၊ သတ္တုတွင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ ဘိလပ်မြေ၊ ကျောက်မီးသွေးတွင်းများ၊ modular အမျိုးအစား (အတူတူအပူပြားနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအစုံ) ။
Belt repair နှင့် splicing လုပ်သည့်အခါအလွှာများကိုဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် DB-G အမျိုးအစားသံမဏိကြိုးသယ်ဆောင်စက်ခါးပတ်အစက်သည်ကောင်းမွန်သောအထောက်အမဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာ splicing အလုပ်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမိုထိရောက်စေပါလိမ့်မယ်။
ရှေ့သို့ Belt Vulcanizing Press Machine အတွက်ရော်ဘာဖိအားအိတ်
နောက်တစ်ခု: အပိုင်းခါးပတ် vulcanizing စာနယ်ဇင်း ZLJ စီးရီးအကြီးစား - အမျိုးအစား
ခါးပတ် Splicing ပစ္စည်းကိရိယာများ
ခါးပတ် Splicing စက်
ပေါ်ကိုခါးပတ် Splicing စက်
ရော်ဘာသယ်ဆောင်ခါးပတ် Splicing စက်